HomeAugust 21, 2019
Permalink August 21, 2019
Karachi, ZIL Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on August 29, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the 2nd Quarterly Accounts for the period ended June 30, 2019. Further, the company has decl ...
Karachi, Saif Power Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on August 28, 2019 at Islamabad. The agenda of the meeting will to consider the half yearly Accounts for the period ended June 30, 2019. Further, the company h ...
Karachi, Waves Singer Pakistan Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on August 29, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Half Yearly Accounts for the period ended June 30, 2019. Further, the ...
Karachi, Habib Insurance Company Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on August 28, 2019 at Karachi. The agenda of the meeting will to consider the Half Yearly Accounts for the period ended June 30, 2019. Further, th ...
Karachi, Akzo Nobel Pakistan Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on August 28, 2019 at Lahore. The agenda of the meeting will to consider the Quarterly Accounts for the period ended June 30, 2019. Further, the compa ...
Karachi, Avanceon Limited informed Pakistan Stock Exchange that board of directors meeting of the company will be held on August 29, 2019 at Lahore. The agenda of the meeting will to consider the Half Yearly Accounts for the period ended June 30, 2019. Further, the company has de ...